अक्षरसँग दुश्मनी गर्नेको जमात बढेपछि बौद्धिक दुर्दशा
इटहरीको सांस्कृतिक भवन प्रशासनिक भवनमा रूपान्तरण
३०२४ पटक पढिएको
इटहरी उपमहानगरपालिका परिसरमा रहेको सांस्कृतिक भवन अब प्रशासनिक भवनमा रूपान्तरण भएको छ । अब त्यहाँ पुस्तकालय रहने छैन । त्यहाँँका पुस्तक पछि कसैले सबुत माग्यो भने देखाइदिन शिक्षाशाखामा राखिएका छन् । केही पुस्तक प्रमुख, उपप्रमुखका आफन्त र केही पुस्तक बन्दरबाँट शैलीमा वितरण गरिएका छन् ।
पुस्तकालय रहेको त्यो सांस्कृतिक भवनमा इजलास बनिएको छ । अब इजलासका लागि आवश्यक पर्ने केरकार शाखा त्यहाँ बन्ने छ । त्यहीँ हिरासत पनि बन्ने छ । अनि इजलासमा बसेर स्थानीय सरकारमा परिणत भएका नगरपालिकाका सम्बन्धित पदाधिकारी नागरिकका मुद्दा छिन्ने छन् ।
नगरपालिका परिसरमा अब साहित्यिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न निषेध छ ।
साहित्यिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न भनेर लक्जम्बर्गका नागरिकले चन्दा उठाएर पठाएका पैसाले सो भवन निर्माण भएको थियो । त्यस देशका प्रतिनिधि जोन पोलले यसै उद्देश्यका लागि यो भवन बनाइदिएका थिए । यो भवनमा नेपाल सरकारको एक पैसा लगानी छैन ।
इटहरी नगरपालिका परिसरमा रहेको यो सांस्कृतिक भवनमा साहित्य र सांस्कृतिक कार्यक्रम निषेध गराउन प्रमुख उपप्रमुख सम्मुखमा देखिएका छन् । तर प्रकारान्तरले समस्त वडाध्यक्षहरु पनि त्यो भवनलाई प्रशासनिक भवन बनाउने कुरामा सहमत रहेको प्रष्ट भएको छ । त्यो सांस्कृतिक भवनबाट पुस्तकालय हटाउन र पुस्तक बन्दरबाँट गराउन पूर्व सभासद् रेवतीरमण भण्डारी पनि लागिपरेका छन् । उनकै कानुनी सल्लाहमा उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले पुस्तकालय र पुस्तक हटाएर सन्तोषको सास फेरेको उनको कार्यकक्षमा जाने आउने बताउँछन् ।
यो सांस्कृतिक भवनले इटहरीको साहित्य र संस्कृतिको पहिचान बोकेको थियो । इटहरीमा हुने सबै साहित्यिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम यही सांस्कृतिक भवनमा हुँदै आएका थिए । अहिले इटहरी उपमहानगरपालिकाका विभिन्न शाखाहरु त्यहाँ सञ्चालन हुन थालेका छन् । अतः इटहरी उपमहानगरपालिकाका वर्तमान पदाधिकारी यो सांस्कृतिक भवनलाई पूर्ण कब्जामा लिएर त्यहाँ रहेका पुस्तक बन्दरबाँट गराएर यसकोे अस्तित्व समाप्त पारेपछि अब सन्तोषको सास फेर्न लागेका छन् ।
इटहरी उपमहानगरपालिका परिसरमा बनेको त्यो भवन इटहरी साहित्यिक समूहको शाखाका रूपमा निर्माण भएको हो । साहित्यिक र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने हेतुले नै यो भवन लक्जम्बर्गका नागरिकका खर्चमा निर्माण भएको हो । यो भवन इटहरी साहित्यिक समूहको शाखाका रूपमा रहने छ भन्ने कुरा लिखितमा थिएन, मौखिकमा थियो ।
तत्कालीन इटहरी गाउँ विकास समिति परिसरमा बनेको यो भवन २०४९ सालमा शिलान्यास भएको हो । भवन शिलान्यास गर्दाका अवसरमा खिचिएको एउटा तस्बिरमा तत्कालीन इटहरी गाविस अध्यक्ष प्रमोद श्रेष्ठलाई त्यहीँ छेउमा देख्न सकिन्छ । श्रेष्ठजीले समूहका तत्कालीन अध्यक्ष धरणीधर दाहाललाई भवन शिलान्यास गर्न लगाएर आपूm साक्षीका रूपमा बसेको यो ऐतिहासिक घटना इटहरी उपमहानगरपालिकाका वर्तमान पदाधिकारीलाई थाहा छैन ।
इटहरीको इतिहाससँग वर्तमान नगर प्रमुख उपप्रमुख पूर्ण परिचित नभइदिएका कारणले पनि इटहरीमा यो बौद्धिक दुर्दशा आएको हो । आपूm पनि नपढ्ने अरुलाई पनि पुस्तक पढ्न नदिने अक्षरसँग दुश्मनी गर्नेको जमात नगरपालिकामा थुप्रिएका कारण सार्वजनिक पुस्तकालयको यो हविगत बनाइएको हो ।
बौद्धिक दरिद्रताको पराकाष्ठा
इटहरी नगरमा बौद्धिक व्यक्ति बस्ता रहेनछन् । प्राध्यापक, डाक्टर, साहित्यकार, पत्रकार र शोधपत्र लेख्ने शोधार्थीलाई यो पुस्तकालयको महत्व रहेनछ पनि भनिरहेका छन् ।
हुन पनि हो । अहिले त्यस्तै देखिएको छ । इटहरीको सामाजिक र राजनैतिक इतिहास पढ्दा पुस्तकालय स्थापना गर्न र पुस्तक सञ्चयका लागि यहाँका तत्कालीन युवाले के के गर्नु प¥यो भनेर वर्तमान नगर प्रमुख र उपप्रमुखले पढिदिएका भए यो पुस्तकालय यसरी क्षतविक्षत हुने थिएन । त्यहाँका पुस्तक बन्दरबाँटमा पर्ने थिएनन् ।
इटहरीका युवाको प्रयासमा भेला भएर पढ्न र साहित्यिक सांस्कृतिक चर्चा गर्ने उद्देश्यले सर्वप्रथम वि.सं. २०२३ सालमा ‘जागृति क्लब’ खुलेको थियो । पञ्चायतको जल्दोबल्दो त्यो समयमा ‘राष्ट्रिय’ शब्द नथपी दर्ता गर्न नपाएपछि राष्ट्रिय शब्द थपेर संस्था दर्ता गराएका थिए । त्यसै इतिहासको साक्षी इटहरीको पुरानो संस्था ‘राष्ट्रिय जागृति क्लब’ अहिले पनि अस्तित्वमा छ । उसले कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
पढ्न, लेख्न र साहित्यिक सांस्कृतिक चर्चा परिचर्चा गर्ने उद्देश्यले नै यहाँका युवाको प्रयासबाट २०२५ सालमा ‘पसिना वाचनालय’ खुलेको थियो ।
यसको लगत्तै वि.सं. २०२६ सालमा ‘इटहरी साहित्यिक पुस्तकालय तथा वाचनालय’ खुल्यो र त्यही संस्थाका व्यक्तिको अगुवाइमा इटहरीको पहिलो पत्रिका ‘झुत्तो’ प्रकाशन भएको हो । यो सब बेलिविस्तार लगाउनुको तात्पर्य इटहरीका युवाको प्रयासमा यहाँ पुस्तक संकलन गर्ने र पढ्ने वातावरण फष्टाएको थियो । तिनकै साङ्गठनिक जगमा सङ्गठित जनताका मतले इटहरीमा जहिले पनि जनजागरण पैदा गर्ने विचारधारा निर्वाचित हुँदै आएको जगजाहेर छ ।
त्यसो त महेन्द्र कलेज धरानको बुक क्लबको इतिहास जान्नेहरु अझै छन् । त्यसको जगमा फष्टाएको वाम विचारधाराका कुरा वर्तमान नगरप्रमुख उपप्रमुखलाई सुनाउनु अरण्यरोदन मात्र हुने छ ।
पुस्तकले दिने ज्ञान अन्य साधनले दिन सक्तैन भनेर इटहरी नगरका प्रमुख उपप्रमुख र पूर्व सभासदलाई सुनाउनु पनि अरण्यरोदन हुने देखिएको छ ।
प्रमुख र उपप्रमुखमा आफू स्थानीय सरकार प्रमुख भएको उन्माद छ । अतः यहाँका साहित्यकार र समाजका कुरा स्ुनुवाइ भइरहेका छैनन् ।
लिखित प्रमाणका अभावमा इटहरी साहित्यिक समूह यस्तै केही लेखेर जानकारी गराएर मात्र बस्न बाध्य छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीले सांस्कृतिक भवनलाई ‘वीरभोग्या बसुन्धरा’को शास्त्रीय उक्ति सार्थक पारेको हेरिरहन पनि बाध्य छ ।
अर्को कुरा इटहरी साहित्यिक समूहको शाखाको रूपमा यो भवन बनिएको थियो भने नगरपालिका घोषणा भएपछि बिस्तारै तत्कालीन पदाधिकारीले कब्जा जमाउन प्रारम्भ गरेका बखत नै किन कुरा चलाइएन भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । तर,साहित्यिक संस्था भनेको दिनहुँ कार्य सम्पादन गर्ने संस्था होइन । यहाँका साहित्यकारले केही जन्म जयन्ती मनाउने कहिलेकाहीं साहित्यिक कार्यक्रम गर्न पाइरहेका थिए । यहाँका सामाजिक संघ संस्थाले पनि न्यूनतम महशुल तिरेर ंकार्यक्रम गरिरहेका थिए । तसर्थ सांस्कृतिक भवनको माथिल्लो तलामा नगर प्रहरी बस्ता वा सङ्कट कालमा प्रहरीले आवास बनाउँदा पनि विरोधका आवाज उठाउन आवश्यक सम्झिइएन ।
त्यसै पनि भवनको रेखदेख, रङरोगन गर्ने काम साहित्यकारहरुबाट सम्भव नहुने भएकाले पनि साहित्यकारहरु मूकदर्शक जस्तो बनेका थिए । तर, दुःखको कुरा हो अहिले इटहरीको साहित्य र सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहिचान बोकेको यो सांस्कृतिक भवन प्रशासनिक भवनमा रूपान्तरित भएको छ । धेरै वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको पुस्तकालय रहेको हल बारेर इजलास बनाइएको छ र अब इजलासका लागि नभई नहुने केरकार गर्ने स्थान बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
त्यस ठाउँबाट पुस्तकालय हटाउने र ई लाइब्रेरी राख्ने भनेर अहिले पुस्तक यत्रतत्र ओसारपसार गरिँदै छ । पुस्तकालयलाई विस्थापित गराउने र त्यहाँबाट पुस्तक हटाएर मात्र सन्तोषको सास फेर्ने काममा विशेष लागि पर्नेहरुलाई कहीँ कतैबाट अवरोध भएको छैन ।
आफूले चिताएको काम निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न हुने भएकाले नगर प्रमुख उपप्रमुख खुशी देखिनु स्वाभाविक हो । तर पुस्तक नपढ्ने उन्माद बोकेका मान्छेका सोच राम्रो भएको कहीँ पनि पाइएको छैन । पुस्तकलाई घृणा गर्नेको भलो भएको संसारमा कहीँ पनि देखिएको छैन ।
नगर प्रमुख उपप्रमुखसँग कुरा गरिएन त भनेर कसैका मनमा उठ्न सक्छ । यसको परिपुष्टिका लागि दुइटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
प्रसङ्ग १ ः
२०४३ सालमा स्थापना भएको इटहरी साहित्यिक समूहले वर्षमा ३÷४ वटा साहित्यिक कार्यक्रम गर्दछ । त्यसमा पनि २९ असारमा पर्ने भानु जयन्ती विशेष कार्यक्रमका साथ मनाउँछ । यो वर्षको भानु जयन्ती मनाउने क्रममा बैठक र सल्लाह गर्न असारको पहिलो हप्तातिरै सांस्कृतिक भवन तिर गयौँ । सधैँ साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने तलको हलमा शिक्षा शाखाका मान्छे थिए । पुस्तकालयमा जाँदा आधाभाग काठले बारेको पाइयो । भुइँमा पुस्तक थुपारिएका थिए । बाँकी पुस्तक र दराज रुँगेर बसेकी कर्मचारी थिइन् । त्यो दृश्यले हामी चकित भयौँ र उपमेयर लक्ष्मी गौतमको कार्यकक्षमा गयौँ ।
‘सांस्कृतिक भवनमा त हामीले बैठक गर्ने ठाउँ पनि पाएनाँै । सब बारबेर भएको रहेछ’, हामीले कुरा उठायौँ ।
‘ठीकै हो दाइ अब त्यहाँबाट त्यो लाइब्रेरी उठ्तै छ । आजको जमानाको मान्छे अब पुस्तक पढ्दैनन् । त्यहाँ अथवा नगरभित्र कहीँ ई लाइब्रेरी सञ्चालन गर्दै छाँै । साहित्यिक सांस्कृतिक सबै कार्यक्रम अब सङ्गीत साधना प्रतिष्ठानमा गर्नुपर्छ । त्यही संस्थालाई नै हामीले विशेष सहयोग गरिरहेका छौँ । त्यो लाइब्रेरी भएका ठाउँमा अब इजलास बनिन्छ । तपाईंहरुलाई बैठक गर्नका लागि म स्थान दिलाइदिन्छु ।’
मेरा आँखा तिरमिराए । केही संक्षिप्त कुरा गरियो । अरु धेरैबेर बसे उपमेयरका आधुनिकताको जवाफ दिइएला । अन्यथा अर्थ लाग्ने कुरा बोलिएला भनेर हामी हिँड्यौँ ।
प्रसङ्ग २ ः
भानु जयन्ती आउनु २ दिन पूर्व इटहरी साहित्यिक समूहको टोलीले नगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीलाई भेट्यो । भानु जयन्तीका अवसरमा वितरण गरिने ‘इटहरी काव्य पुरस्कार’ इटहरी उपमहानगरपालिकाले प्रायोजन गर्दै आएको छ । नगरपालिका सहआयोजक हो । तसर्थ नगर प्रमुखलाई प्रमुख अतिथि बनाउने र पुरस्कार वितरण गराउने प्रचलन छ । अतः नगरप्रमुखलाई प्र्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह ग¥यौँ । १ घण्टाका लागि कार्यक्रममा बस्ने तय भयो । त्यहाँ पनि हामीले भवनका कुरा उठायौँ ।
‘धेरै कर्मचारी अटाउनु पर्नेछ । अन्यत्र ठाउँ छैन’, नगरप्रमुखबाट यही जवाफ पायौँ ।
त्यो सांस्कृतिक भवनको पुस्तकालयको अस्तित्व स्थानीय तहको यही कार्यकालमा समाप्त हुने रहेछ । साहित्यिक सांस्कृतिक अस्तित्व बोकेको सांस्कृतिक भवन अब प्रशासनिक भवनमा परिणत हुने रहेछ भन्ने निष्कर्ष निकालेर हामी हिँडेका थियौँ ।
(लम्साल इटहरी साहित्यिक समूहका अध्यक्ष तथा सुनसरीका पुराना पत्रकार हुन्)